काेराेना लाइभका हात हल्लाउनेहरू
केशवराज जोशी काठमाडौं, ३ जेठ
नेपाल टेलिभिजनले प्रत्येक दिन दिउँसो ४ बजेको समाचार बुलेटिनपश्चात् देशभरको कोरोना संक्रमणको ताजा अवस्थाको जानकारी गराउँछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कोरोना संक्रमण र सावधानीका उपायबारे जानकारी दिइरहेका बेला छेउमा उभिएर एक जना हात हल्लाइरहेका देखिन्छन् ।
धेरैलाई यो दृश्य अनौठो लाग्न पनि सक्छ । कतिपयको मनमा ती व्यक्ति को हुन् ? त्यहाँ के गरिरहेका छन् ? त्यस्तो किन गरिरहेका छन् ? भन्ने पनि लाग्न सक्छ ।
मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा देखिने यी व्यक्तिहरू अर्कै दुनियाँका र चटके जस्ता पनि लाग्न सक्छन् । कतिपयले त हात हल्लाइरहेका यी व्यक्तिहरूलाई कार्यक्रम लाइभ हुँदा तल कमेन्टमा ‘यी पागलहरू के गरिरहेका छन् ?’ भनेर कमेन्टसमेत गरेका छन् । तर, उनीहरू न पागल हुन्, न त चटके नै । उनीहरू त सूचना सम्प्रेषक हु्न् ।
बहिरोपन भएका व्यक्तिहरूको संविधानप्रदत्त सूचनाको हक सुरक्षित गरी उनीहरूसम्म सूचना पुर्‍याउन यी ‘हात हल्लाउनेहरू’ले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन् ।
नुवाकोटका दिनेश श्रेष्ठ र म्याग्दीका सागर सुवेदी गरी अहिले २ जनाले उक्त सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । श्रेष्ठ राष्ट्रिय साङ्केतिक भाषा दोभासे संघका अध्यक्ष हुन् भने सुवेदी सोही संघका केन्द्रीय सदस्य ।
सागर सुवेदी अहिले २८ वर्षका भए । उनका ३ जना आफन्तहरूमा बहिरोपनको समस्या थियो । उनलाई ती ३ जनाको उपचार गर्न पाए पनि हुन्थ्यो नि भन्ने लाग्थ्यो । विविध कारणले उनी डाक्टर हुन त पाएनन् तर डाक्टर भएर ३ जनाको सेवा गर्नुभन्दा साङ्केतिक भाषाको माध्यमले ३ लाखलाई उनीहरूको बोली बनेर सेवा पुर्‍याउन पाउँदा उनी सन्तुष्ट छन् ।
बहिरोपन भएका आफन्तहरूसित घुलमिल हुँदा उनले केही साङ्केतिक भाषाको ज्ञान हासिल गरे । पछि उनले साङ्केतिक भाषाको ४ महिने प्रशिक्षण नै लिए । अहिले त्यस्तो प्रशिक्षण ६ महिनासम्म दिने गरिन्छ ।
सागरले १३ वर्षको उमेरमै बुबा गुमाए । उनी पढाइमा अब्बल थिए । त्यसैले उनले स्कुलको शुल्क तिर्नुपरेन । म्याग्दीकै माउण्ट एभरेस्ट स्कुलमा एसएलसीसम्म पढेका सागर कक्षामा सधैँ प्रथम हुन्थे ।
कक्षा १० सम्म पूरै निःशुल्क पढेका सुवेदीले २०६४ सालमा एसएलसी परीक्षा दिए । एसएलसीमा उनी जिल्लाभरमा चौथो स्थानमा आउन सफल भए । राम्रो अंक ल्याएकै कारण आईएस्सीमा उनले निःशुल्क पढ्ने अवसर पाए ।
उनी डाक्टर वा इन्जिनियर बन्न चाहन्थे । उनले त्यसको तयारी पनि गरे तर यी दुवैमा उनलाई स्वाद आएन । त्यसको धङधङीबाट छिट्टै नै बाहिर निस्किए उनी । अन्ततः उनी एक जना आफन्तमार्फत् राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको सम्पर्कमा आए ।
त्यहाँ भने उनले मन लगाएर काम गर्न थाले । उनलाई उक्त काममा स्वाद पनि आउन थाल्यो । नेपाल कमर्स क्याम्पसबाट स्नातक तहको अध्ययन गरेका उनी अहिले आफ्नो पेसाप्रति सन्तुष्ट छन् । भन्छन्, ‘सुरुमा ३ जना आफन्तको उपचार गर्नकै लागि भए पनि डाक्टर बन्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो तर अहिले ३ लाखको आवाज बन्न पाउँदा गौरवको अनुभूति हुन्छ ।’
अहिले उनले आफन्त र चिनेजानेकाहरूबाट पनि प्रशंसा र प्रोत्साहन पाएका छन् । स्कुलका शिक्षकहरूले पनि ‘केटोले राम्रो गरेको छ’ भन्दै हौसला प्रदान गर्छन् रे !
यो त अरूको कुरा भयो उनी आफैँलाई चाहिँ के लाग्छ त ? ‘आम्दानी पनि ठीकै छ, समाजसेवा गरेको जस्तो पनि भयो’, सुवेदी भन्छन्, अहिले त टेलिभिजनमा पनि देखिन थालेको छु । एक हिसाबले सेलिब्रिटी जस्तै भएको छु । यो सबै देख्दा खुसी लाग्छ ।’
मासिक तलबवापत उनी २६ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । कुनै कार्यक्रम वा सभा, समारोहहरूमा जाने अवसर पाइएमा भने दिनको २ देखि ३ हजार रुपैयाँसम्म भत्तासमेत पाउँछन् । यसरी उनी मासिक औसत ४० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछन् । ‘कामबाट प्राप्त हुने आत्मसन्तुष्टिको त कुनै मूल्य हुने कुरै भएन, त्यो अमूल्य छ’, उनी भन्छन् ।
दिनेश श्रेष्ठ अहिले ३० वर्षका भए । ताहाचल क्याम्पसमा पढ्दा उनी केही बहिरा साथीहरूको सम्पर्कमा आएका थिए । उनीहरूसितको नियमित उठबसले उनलाई साङ्केतिक भाषातर्फ आकर्षित गर्‍यो । नियमितजसो ती व्यक्तिहरूसित कुरा गर्नुपर्ने भएकाले उनी साङ्केतिक भाषाप्रति आकर्षित भए ।
२०६६ सालमा साङ्केतिक भाषाको प्रशिक्षण लिएका श्रेष्ठले त्यही सालदेखि संविधानसभामा नेकपा संयुक्तका समानुपातिक सभासद रघुवीर जोशीको सहयोगीका रूपमा समेत काम गरेका थिए ।
संविधानसभामा सभासदहरूले आफ्नै आवाजमा आफ्ना कुराहरू रेकर्ड गराउनुपर्ने प्रावधानका कारण सभासद जोशीले सभासद भएको ६ महिनासम्म संविधानसभामा बोल्न पाएका थिएनन् । उक्त नियम परिमार्जन गरी बोल्न नसक्ने सभासदहरूले सहयोगी राख्न पाउने प्रावधान समेटिएपछि श्रेष्ठले सभासद जोशीका सहयोगीको रूपमा काम गर्ने अवसर पाएका थिए । नेपालको इतिहासमा सभासद नभईकनै आफ्नो आवाज रेकर्ड गराउने व्यक्ति पनि यिनै श्रेष्ठ हुन् ।
यसअघि एबीसी र प्राइम गरी २ वटा राष्ट्रिय टेलिभिजनहरूमा समेत काम गरिसकेका श्रेष्ठलाई धरै मान्छेसम्म पुग्न भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनले सहयोग गरेको छ । उनलाई अहिले धेरैले चिन्न थालेका छन् । धेरैले मान्न थालेका छन् ।
‘यसअघि साङ्केतिक भाषाका बारेमा खासै चेतना थिएन तर यो कार्यक्रम सुरु भएपछि यसको खोजी हुन थालेको छ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यस विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्न यो कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ ।’
राष्ट्रिय बहिरा महासंघमा उनको जागिर छ । २६ हजार रुपैयाँ मासिक तलबका अतिरिक्त सभा, सेमिनारहरूमा जाँदा आउने दैनिक भत्तासमेत गरी मासिक ४० हजार रुपौँसम्म आम्दानी हुन्छ उनको । यो आम्दानी उनको ६ जनाको परिवार पाल्न पर्याप्त छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको दैनिक बुलेटिनमार्फत् सेवा पुर्‍याउन पाएकामा उनी खुसी छन् । यसका लागि राष्ट्रिय बहिरा महासंघका अध्यक्ष के.पी. अधिकारी, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासघका महासचिव राजु बस्नेत र श्रेष्ठ स्वयंले पनि धेरै डौदधुप गरे ।
सुरुमा मन्त्रालय उनीहरूको कुरामा सहमत देखिएको थिएन । तर धेरै चरणहरूमा उनीहरूले साङ्केतिक भाषाको महत्त्व बुझाएपछि मन्त्रालय सहमत भयो ।
अहिले यो कदमको राम्रो प्रतिक्रिया आएकाले मन्त्रालय पनि सन्तुष्ट छ । यसमा काम गर्नेहरू खुसी नहुने त कुरै भएन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले साङ्केतिक भाषामा समेत कोरोनाको सूचना प्रवाह गरेको देखेपछि अन्य सरकारी निकायले पनि त्यसको आनुसरण गर्न थालेका छन् ।
पोखरा स्वास्थ्य निर्देशनालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलगायतका निकायहरूले यसको अनुसरण गरेका पाइन्छ ।
श्रेष्ठको बुझाइमा यस कार्यले पनि समाजमा धेरै परिवर्तन त ल्याएको छैन तर ‘बेकारमा हात किन हल्लाउँदा रहेछन् ?’ भनेर प्रश्न गर्नेहरूलाई यसको महत्त्वका बारेमा जानकारी प्रदान गरेको छ ।
श्रेष्ठलाई पनि अहिले पहिलेको तुलनामा चिन्नेहरू बढेका छन् । परिचय गर्न आउनेहरू थपिएका छन् । समग्रमा अहिले उनको नयाँ पहिचान बनेको छ ।
आर्थिक रूपमा पनि सहयोग मिलेको छ । महासंघले यहाँ काम गर्नेहरूलाई दिनको ३ हजार रुपैयाँका दरले दैनिक भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । सामान्यतया २ घण्टाभन्दा कम सेवा पुर्‍याएबापत २ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी समय सेवा गरेबापत ३ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
आयआर्जन र सामाजिक कार्य एकसाथ भएकाले श्रेष्ठ आफ्नो पेसाप्रति पूर्ण सन्तुष्ट छन् ।
अहिले देशमा करिव ३ लाखको हाराहारीमा बहिरोपन भएका व्यक्तिहरू छन् । तर, व्यावसायिक साङ्केतिक भाषा दोभाषेहरू २० जना मात्र छन् । ५० जनाले साङ्केतिक भाषाको प्रशिक्षण लिएका छन् तर व्यावसायिक रूपमा २० जनाले मात्र यस्तो सेवा प्रवाह गर्ने गरेका छन् ।
अहिले नेपालमा ४ हजार ७ सय शब्दहरूलाई मात्र साङ्केतीकरण गरिएको छ । त्यसैले साङ्केतीकरण नगरिएका र प्राविधिक शब्दहरूको भाव दर्शाउन समस्या रहेको उनीहरू बताउँछन् ।
केही शब्दहरूमा पर्यायवाची शब्द त केहीमा हिज्जेको माध्यमले अर्थ बताउने प्रयत्न हुने गरेको तर वक्ता छिटोछिटो बोल्ने खालको परेमा भने त्यसलाई त्यही गतिमा प्रस्ट पार्न समस्या हुने उनीहरूको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा साङ्केतिक भाषाका दोभाषेहरूले सङ्क्षेपमा मूल भाव बुझाउने कोसिस गर्नुपर्ने सुवदी र श्रेष्ठ बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ३, २०७७, ०७:३६:००